Android App များ
Regeneration Mobile Professional Service & Training Center
Blog Statistics	Total Visitors: 258359
Huawei ဖုန်းများကို Root လုပ်နည်း
Samsung ဖုန်းများအား Root လုပ်နည်း
Sony ဖုန်းများ Root လုပ်နည်း
Xiaomi ဖုန်းများကုို Root လုပ်နည်း
Asus ဖုန်းများအား Root လုပ်နည်း
XBO Firmware များ
Acer Firmware များ
Xiaomi Firmware များ
Gionee Firmware များ
Huawei ဖုန်းများ Firmware တင်နည်း
Lenovo ဖုန်းများ Firmware တင်နည်း
Window PC သုံး Software များ
Mac (OSX) အတွက် App များ
Offical Box Setup
Box Crack များ
Android App များ Archive
Regeneration Meizu Model Checker v1.1
Android App များ, Mobile Tool များ, Window PC သုံး Software များ
Meizu Model တွေ Logo ရပ်နေလို့ Model ခွဲခြား ရခက်နေတာဖြစ်ဖြစ် Lock ကျနေတာဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ Model ခွဲခြားနိုင်မဲ့ Software လေးပါ။ Software Run မရသူများ .net Framework 4.5 ထည့်သွင်းပေးပါ. ဖုန်းကို Volume Down + Power ဖိနှိပ်ပြီး Fastboot Mode အနေအထားကနေ ကြိုးထိုးပေးရမှာပါ။ Developed By Phyo Chan (Regeneration Mobile Service & Training Center) http://d-h.st/XwS0 Read More
Meizu,Xiaomi ဖုန်းများ Root မလို Google Installer
Google App တွေသွင်းဖို့အကောင်းဆုံး App တစ်ခုပါ. Root လုပ်ထားစရာမလိုပါဘူး. အောက်မှာ Download ရယူပါ။ Credit – Zayar Winko	Read More
Huawei Service (IMEI,Network Lock,Theme,Noti Bar All Fix)
Android App များ, Mobile Tool များ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
Huawei Service လို့ပဲနံမည်ပေးထားပါတယ် လုပ်ထားတာတော့ကြာပြီ CMDပိုင်း အားနဲ့တဲ့ညီကိုတချို့အဆင်ပြေအောင်ပေ့ါ Board Firmwareတင်ပြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Dloadတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလိတာပဲဖြစ် ဖြစ်ပေါ့ IMEIပျောက်တာ Noti / Themes ပျောက်တာ Internal0ဖြစ်တာ Network lock တွေအတွက် oem ထည့်ပြီးFixလုပ်ပေးသွားမှာပါ Apk မှာ မိမိModel အတွက် Install လုပ်တဲ့အခါမှာ Install Process အတွက် ခဏစောင့်ပေးပါ Apk ရဲ့ Activity UI ပိုင်းက ခဏ ဟန်း သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Finish ပြတဲ့ အထိစောင့်ပေးပါ မစောင့်ပဲပြန်ထွက်ရင် မလိုလားတဲ့ Error တက်မှာစိုးလို့ပါ ပြသနာတော့မရှိပါဘူး App ရဲ့ Bug အတွက် reply ပြောပေးပါအုံး	Read More
Pokemon Go For Android (Mediafire Resume Download)
အခုတလောလူကြိုက်များနေတဲ့ Pokemon လေးတွေလုိုက်ဖမ်းရတဲ့ Game လေးပါ။ Download ဆွဲရလွယ်အောင် Mediafire ကနေ တင်ပေးလုိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ Download ရယူပါ။	Read More
EPO GPS Tools For MTK Devices
အခုတလောခေတ်စားနေတဲ့ Game လေးတခုဖြစ်တဲ့ Pokemon Go ကစားရာမှာ MTK Devices တွေမှာ GPS အဆင်မပြေမှုလေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတခုကို အားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေးသုံးမယ်ဆိုလျှင် မိမိတို့ ဖုန်းမှာ Root Access ရှိထားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲဆိုတာကို ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ…….. Download EPO Tools	Read More
Zapya (Gallery ထဲတစ်ခါထဲတန်းရောက်)
Zapya သုံးပြီး Photo တွေ Video တွေ Share ရင် Gallery ထဲတန်းမရောက်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီ Zapya ကအဲ့ Error မျိုးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါအုံး 🙂 Credit – Khin Zaw Hein	Read More
Samsung Tool Pro 25.5 (For Z3X Box User)
Android App များ, Mobile Tool များ, Offical Box Setup, Window PC သုံး Software များ
Z3x Box အသုံးပြုတဲ့ Bro တွေအတွက် မေ၂၇ရက်ထွက် ၂၅.၅ လေးတင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ Download ရယူပါ။ Read More
ကွန်ပျူတာမလုို Root နုိုင်တဲ့ အသစ်ထွက် King Root
Android App များ, Root နည်းများ, Window PC သုံး Software များ
ဖုန်းတော်တော်များကုို Root နုိုင်တဲ့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ Apk လေးဆုိုတော့ဖုန်းထဲမှာတင် လွယ်လွယ် Root နုိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီမှာ Download ဆွဲထားလုိုက်ပါ။	Read More
12	Facebook Live Traffic Stats
Find us on Facebook	Regeneration Mobile Professional Service & Training Center Copyright © 2017.
Founded By Phyo Chan (MMSD) Back to Top ↑